DxOMark nwalere Samsung's Galaxy Z Flip igwefoto | Gam akporosis
El Ihe nkiri Galaxy Z, mobile malitere na February nke afọ a dịka otu n'ime mpịachi kachasị mma nke Samsung, bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke afọ a, na-enwe atụmatụ pụrụ iche n'ime.
Ekwentị na-anọchi anya ọtụtụ ihe, otu n'ime ha metụtara ngalaba foto ya, nke mejupụtara isi ihe ntanetị 12 MP (f / 1.8) + 12 MP (f / 2.2) obosara. Ọnụ ahụ nwekwara igwefoto 10 MP maka selfies, mana oge a, anyị ga-elekwasị anya na ndị isi ebe ọ bụ na ha bụ ndị DxOMark nyochara ma nyochaa n'ụzọ zuru ezu. Nyochaa n'elu ikpo okwu bụ nkọwa zuru ezu n'okpuru.
1 Nke a bụ ihe DxOMark gosipụtara banyere igwefoto na Samsung's Galaxy Z Flip
1.1 Autofocus na-adịghị mma
1.2 Kedu maka igwefoto igwefoto dị elu?
1.3 Nsonaazụ bokeh bụ mgbe niile
1.4 Foto abalị ị nwetara dị mma
1.5 Video, otu akụkụ dị mkpa
Nke a bụ ihe DxOMark gosipụtara banyere igwefoto na Samsung's Galaxy Z Flip
Galaxy Z tụgharịa nyocha igwefoto | DxOMark
Site na akara igwefoto n'ozuzu 105 nyere site DxOMark, Samsung Galaxy Z Flip nọ n'etiti etiti iri abụọ nke smartphones na nchekwa data nke ikpo okwu. Ọ bụ arụmọrụ a na-akwanyere ùgwù, na-ekwu okwu n'ozuzu, nke dị n'azụ Apple's iPhone XS Max, nke bịara na nke abụọ na-anwale afọ abụọ gara aga. Igwefoto Flip ahụ na-agbakwunye ihe ndị bụ isi, yana ngosipụta ziri ezi yana oke nguzo ọcha zuru oke.
Ọtụtụ mgbe, ekwentị ahụ na-ejikwa ọnọdụ dị iche iche dị elu nke ọma, na-enye ezigbo usoro dị iche iche, ọ bụ ezie na ndị ọkachamara DxOMark hụrụ ụfọdụ ịpịpụta isi ihe na ndò n'ọnọdụ dị iche iche. Agbanyeghị, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọbụlagodi n'ime, Flip na-enye mmụba ụcha na-enye obi ụtọ, ọ bụ ezie na n'èzí, agba na-adịkarị ntakịrị.
Samsung Galaxy Z Flip na-ejide mkpọtụ nke ọma ma n'ime ụlọ ma n'èzí. Ọ bụ ezie na ọ na-ahụ mgbe ụfọdụ, mkpọtụ ahụ adịghị emetụta. N'èzí n'ìhè dị mma, Galaxy Zlip Flip n'ozuzu ya na-agwakọta mkpọtụ mkpọtụ na njigide nkọwa, na-ebubata foto na ọdịdị dị mma na obere mkpọtụ. Uche, n'ọnọdụ ụfọdụ, Flip ahụ na-achụrụghị nkọwa zuru oke, na-eme ka ederede nke ekwentị ndị ọzọ jikwaa.
Autofocus na-adịghị mma
Arụ ọrụ autofocus Flip bụ akpa agwakọtara. Ozi ọma ahụ bụ na ọ ziri ezi ma na-agbanwe agbanwe, mana akụkọ ọjọọ ahụ bụ na ọ dị nwayọ, na-akụda mmụọ, ebe ọ bụ na ọsọ AF anaghị abụkarị nsogbu maka ekwentị dị elu ụbọchị ndị a.
Samsung Galaxy Z Flip nwetara akara ngosi nke 70, nke na-adịghị njọ, mana o siri ike ịbụ onye ndu na klaasị ya. Ihe okike na-ada ụda na-ada ụda bụ ihe a na-ahụkarị, na nro na-abanye n'ime nkuku eku. Flare, ghosting, acha fringes, na moiré mgbe ụfọdụ na-egosi.
Kedu maka igwefoto igwefoto dị elu?
Foto sara mbara | DxOMark
Igwefoto igwefoto nke Galaxy Flip Z na-enweta a ọkwa dị mma nke 43 na nyocha DxOMark, na-emewanye ọtụtụ ekwentị nwere ọnụ ọgụgụ zuru oke (gụnyere nkwado mbụ na-akwado ya, Huawei P40 Pro). Ọ nwere ogologo oge anya nke 12mm, nke sara mbara karịa ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ, n'ihi ya, ọ nwere ike ibute ọtụtụ n'ime etiti. Agba dị mma, ikpughe ziri ezi, na oke dị iche iche dị obosara ma n'ime ma n'èzí.
Ọ bụ ezie na Galaxy Z Flip nwere obi ụtọ ịga n'ihu, ọ bụghị ya na-achọ ịga ogologo oge. Na-enweghị telephoto modul na o yiri ka enweghị ihe ọ bụla gimmicks dị ka Google's Super Res Zoom, mbugharị nke Galaxy Z bụ ihe dị mfe nke ịkụ na ịlele data onyonyo sitere na igwefoto isi. Nsonaazụ ahụ adịghị mmadị ka nkọwa na-ebelata ngwa ngwa ka mbugharị mbugharị na-abawanye, yana mkpọtụ a na-ahụ anya na akụrụngwa timbre na-ada ụda dị ka algorithms na-egbusi na-agagharị na obere na nzaghachi ọhụụ.
Otu esi enweta ọtụtụ n'ime ọnọdụ Flex nke Galaxy Z Flip
Nsonaazụ bokeh bụ mgbe niile
Flip ahụ na-enweta akara Bokeh nkezi nke 50, n'azụ ụdị arụmọrụ nke ekwentị dị elu. E nwere ihe omimi dị omimi; dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ algorithm ga - eme ka ihu isiokwu ahụ dị nkọ mana mebie ahụ.
N'akụkụ na-enwu gbaa, ọdịdị nke bokeh na-adịkarị mma ma na-ekesa mkpọtụ (Somefọdụ ekwentị na-eme ka mkpọtụ ghara ime mkpọtụ site n'ime ka ha ghara imebi, na-eme ka isiokwu ahụ dị ka mkpọtụ na-adịghị mma.) Agbanyeghị, blug gradient n'onwe ya na-adịkarị ihe na-ekwekọghị n'okike.
Foto abalị ị nwetara dị mma
N'abalị foto na-enweghị flash | DxOMark
Mgbe ọkụ gbanyụrụ, ihe Galaxy Z Flip na-arụ ezigbo ọrụ ya na ihe osise eserese. Agbanyeghị, na nyocha nke ọma, nkọwa dị ala na mkpọtụ dị elu.
Okirikiri obodo abalị adịghị oke oke mma, yana obere nkọwa zuru oke na oke mkpọtụ. N'aka naanị ya, ekwentị ahụ ga-agbanye ọkụ ya mgbe ụfọdụ iji gbalịa gbaa ọkụ gbaa obodo ahụ (nke a abụghị ezigbo echiche, DxOMark gosipụtara). Nke ahụ kwuru, nkọwa na mkpọtụ dị na ọkwa yiri nke iPhone 11 Pro Max. Ihe ngosi Galaxy 10 + 5G dị ntakịrị karịa Flip, ma na-enye ihe oyiyi dị ọcha.
Video, otu akụkụ dị mkpa
N'ihe banyere idekọ vidiyo, ihe Galaxy Z Flip na-enye ọgaranya, agba mara mma na ikpughe ziri ezi. Na mgbanwe nnabata site na onyonyo onyonyo nke ekwentị ahụ, autofocus na-adị ọsịsọ ma na-adịgide adịgide. N'èzí, nkwụsi ike dị irè. Nchịkọta vidiyo ya niile nke 96 dị mma, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ntakịrị n'azụ ọtụtụ ekwentị kachasị elu.
Na downside, a na-amachibido ike dị omimiihe ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-agbapụ ihe nkiri dị iche-iche. Igwe na-enwu gbaa na mkpọtụ chroma na-eweda ogo oyiyi n'ọnọdụ niile, yana obere ọkụ, na-enweghị ihe ijuanya, nke kachasị njọ.
Nnwale gosikwara na ọ bụ ezie na mgbatị na-arụ ọrụ nke ọma n'èzí, ọ bụ akụkọ ọzọ n'ime ụlọ, yana mmepụta ịma jijiji na nnwale vidiyo na-eje ije. Nkọ mgbe ụfọdụ dịgasị na nsonye gbaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọ bụ Samsung's Galaxy Z tụgharịa ekwentị nwere ezigbo igwefoto? [Nyochaa DxOMark]
OnePlus Z ga-abịa na nhazi Snapdragon 765